Saynis yahano reer Japan ah ayaa soo saaray talaalka ka hortagga gabowga
Bogga horeCaafimaadka War
Koox cilmi baaris ah oo Japan ah ayaa sheegtay in ay soo saarayso tallaal ka hortagga gabowga. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka takhalusto waxa loogu yeero unugyada zombies ee ku urura da'da oo waxyeello u geysta unugyada deriska ah. Jariidada Japan Times ayaa wax ka qortay.
Saynis yahano uu hogaaminayo borofisar ka tirsan jaamacadda Juntendo Toru Minamino, ayaa cadeeyey borotiin laga helo unugyada dareenka ee dadka iyo jiirarka. Iyada oo ku saleysan, tallaalka peptide-ka ayaa la sameeyay kaas oo dhaqaajiya habka difaaca aadanaha oo ku qasbaya inuu weeraro unugyada joojiyay qaybinta.
Tijaabooyin la sameeyay ayaa muujiyay in dawadu ay kicisay soo saarista unugyada difaaca jirka ee jiirarka, kuwaas oo iyaga oo adeegsanaya unugyada dhiiga cad ay weeraraan unugyada gabowga ee jidhkooda. Celceliska cimriga jiirka shaybaadhka ee qaata dawada ayaa kordhay 15% marka la barbar dhigo kooxda xakamaynta, iyo shakhsiyaadka qaba qallafsanaanta halbowlaha, hoos u dhac weyn ayaa lagu arkay meelaha dhaawaca ah ee xididdada dhiigga.
Wali lama oga in dawada loo ogolaan doono tijaabooyinka caafimaad ee bini aadamka. Xitaa haddii ay tani dhacdo, waxay qaadan doontaa ugu yaraan dhowr sano si loo sugo natiijooyinka.
Si kastaba ha ahaatee, daahfurka ayaa u muuqda mid rajo leh. Ka dib oo dhan, gabowga gacanta ayaa la xidhiidha cudurro badan oo gabowga, oo ay ku jiraan Alzheimers iyo Parkinson, cataracts, cudurrada wadnaha iyo xididdada, sonkorowga nooca II iyo kansarka. Tallaalka cusubi wuxuu ka caawin karaa inay horumar weyn ka sameeyaan daawaynta.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Saynis yahano reer Japan ah ayaa soo saaray talaalka ka hortagga gabowga!